Iiplanethi zeVenus ezinentsingiselo kunye nefuthe kwi-Astrology - Amanqaku Ngeenkwenkwezi
Eyona Amanqaku Ngeenkwenkwezi Iiplanethi zeVenus ezinentsingiselo kunye nefuthe kwi-Astrology
Iiplanethi zeVenus ezinentsingiselo kunye nefuthe kwi-Astrology
Kwienkwenkwezi, uVenus umele iplanethi yenyama, ubufazi, uthando kunye nokulula. Le planethi ilawula indawo yobugcisa, yonke into enento yokwenza nehlabathi labasetyhini kunye nezinto zodidi.
IVenus ikwanxulunyaniswa nothixokazi wothando kunye nobuhle, uAphrodite kwaye ungumlawuli weempawu ezimbini ze-zodiac: ITaurus kwaye ILibra . Indawo ezikuyo kwitshathi yokuzalwa iyakuba nefuthe kwindlela umntu azobugcisa ngayo, indlela aziphethe kakuhle ngayo, kodwa uya kuba nentetho yokuba uyonqena kwaye angabinangqondo kangakanani na.
Iplanethi yesibini ukusuka eLangeni kunye neplanethi ekufutshane eMhlabeni, iVenus ithatha malunga neentsuku ezingama-225 ukugqibezela ujikelezo, olukwicala elichaseneyo nezinye iiplanethi.
Emva kweNyanga, ikhanya ngokuqaqambileyo kunezinye iiplanethi kwaye iyafana ngobukhulu noMhlaba, yiyo loo nto ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba 'yiplanethi kadade'. Umphezulu wayo ufana nqwa wentlango kwaye kukho iindlela ezininzi zalapho.
Malunga noVenus ngeenkwenkwezi
Le planethi ikwalawula indlela umntu ahambelana ngayo nabanye abantu, ngakumbi kwimbono yothando kunye nendlela iimvakalelo kunye neemvakalelo ezibonakaliswa ngayo. Kwelinye icala elichaseneyo, inokubonisa ukungathandeki kunye nokugxeka.
IVenus ityhalela ebuntombini nakulonwabo kwaye inokubangela ubutyebi ekuziphatheni, njengoko ikhuthazwa kukubona abo bonwabileyo.
Impembelelo zayo zinokuyila indlela umntu azibona ngayo izinto abazingqonge ngazo, zingakanani incasa abanazo kwimpahla, ifenitshala okanye ezinye izixhobo.
Iplanethi inokuthi inxulunyaniswe nokuzichaza kunye nendlela umntu azikhulisa ngayo iitalente zabo kunye nezakhono, zihlala zinendawo yokutsala imbeko kunye nokunconywa ngabo bajikeleze kunye nobutyebi.
IVenus iphakanyisiwe intlanzi , Ithetha ukuba oku kulapho xa ujikelezo lwayo luphuculwe. Ibuthathaka kwi Intombazana kunye nokwenzakalisa IiAries kwaye IScorpio , xa kuvulwa imiceli mngeni emininzi.
Eminye yemibutho yayo eqhelekileyo ibandakanya:
Umlawuli: ITaurus kunye neLibra
Indlu yeZodiac: Inkqubo ye- Isibini kwaye indlu yesixhenxe
Umbala: Luhlaza kwaye luhlaza
Usuku lweveki: uLwesihlanu
Ilitye elinqabileyo: Isafire kwaye Emerald
Ixesha ebomini: Ukususela kwiminyaka eli-14 ukuya kwengama-21
Igama elingundoqo: Ubuhle
IVenus imalunga nothando kunye nokuzonwabisa, imalunga nokuba nesisa kwabo ubathandayo kwaye ube nesisa kwihlabathi ngeetalente onazo.
Le planethi ikwachaphazela iintlobo zabantu obatsalelayo ebomini bakho kwaye ngawaphi amava onawo naba bantu, indlela ababucebisa ngayo ubomi bakho kunye nento onikezela ngayo.
Ngamandla okuyila emva kwemizamo ehambelanayo kwaye anokuphazamisa nkqu nezona zinzulu kakhulu kwimisebenzi yobuhle.
Xa usePisces, ngexesha lokuphakanyiswa kwayo, iVenus ikwalawula imicimbi yokomoya, malini ixabiso umntu alibeka kwi-intuition yabo kunye nokuba bathembele kangakanani kwimiqondiso evela kwilizwe langaphandle.
Kukho enye indlela yamandla afihliweyo kwiVenus, enceda umntu ngamaxesha anzima kubomi babo bothando kwaye abakhokelele kolona khetho lubalaseleyo, nokuba oku akunakubonakala ngokukhawuleza.
Ukuba uVenus ulawula umtsalane kufuneka uchaphazele nento oyithiyileyo nento obaleka kuyo. Ubutsalane bayo bubonakala buhamba zimbini iindlela. Ikwenza ukuba umntu angakhathali kwaye aphazamiseke.
Inokuvumela umntu ukuba angene kwizilingo ezingenampilo okanye eziluncedo kuzo. IVenus inokubonakalisa isimilo esingathandabuzekiyo eluthandweni, ngokubhekisele kumaqabane amaninzi hayi indlela ethembekileyo ethembekileyo.
Ukungalunganga kweVenus kuyakwenza ukukhanya kube nentloko kwaye kungabonakali kodwa kwangaxeshanye kuya kuphakamisa umnqweno wentlalontle kunye nemfuno yokurhangqwa ngabantu ngokuchaseneyo nokuzibonela ukubonakalisa nokuzikhetha.
Nge-30 kaDisemba i-Zodiac yiCapricorn-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
nguwuphi umqondiso ongumhla we-12
ungaxelela njani ukuba indoda yanamhlanje iyakuthanda
Ilanga kwi-virgo inyanga kwi-leo
ndingu mqondiso mni ukuba ndazalwa ngo-novemba
nguwuphi umqondiso okwaziyo 20
yintoni uphawu lukajuni 20 zodiac